Mucjisadii cayaaraha Degmooyinka oo caawa ka dhacday Garoonka Eng Yariisow. – Al-Hurriyah
Muqdisho Decenber 05 2019 Al-Hurriyah Sports): Waxaa caawa soo gabagaboobay Tartankii Cayaaraha Kubadda Cagta ee Degmooyinka G/Banaadir cayaarta kama dambeysta ah ayaa waxaa isku arkey kooxaha matalayay degmooyinka Waaberi iyo Dharkeenley.
90 ki daqiiqo ee cayaarta ayaa kusoo gaba gabowday bar-bar dhac eber iyo eber ah (Waaberi 0 VS Dharkeenley 0), 2da kooxood ayaa muujiyay ciyaar xirfadeysan.
Dhanka kale Kooxda ku ciyaareysey Degmada Dharkeenley ayaa caawa muujisay cayaar xiiso leh ayada oo weeraro qatar ah oo is xig xiga la beegsanaysay kooxda Waaberi. Waaberi ayaa dhinaceeda ka faa sameyneysay counter attach inkastoo ciyaar ahaan ay ka hooseysay Dharkeenleu.
Marki 2da koox ay isku mari waayeen 90 ki daqiiqo ayaa waxa looga gudbay Gool kulaad. Waaveri ayaa lumisay 2ba fursad oo goolashii banaanka dhigay halka Dharkeenleyna laga qabtay 1 gool.
Ugu dambeyn Kooxda Dharkeenley ayay halkaasi guusha ku raacday ayadoo kooxdi loogu magac Baraaziishi Somalia ee Waaberi ayaa lagalbatay caawa guul daro kadib mudo sanado ah oo ay ku naalooneysay guulo is xigxigo, sikastaba ha ahaatee, Dharkeenley ayaa noqotay horyaalka 17 degmo ee Gobolka Banaadir, waxayna u ahayd caawa Degmada Dharkeenley 8sano kadib farxad iyo dabaaldag.
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Beesha Caalamka Ka Codsaday In Si Degdeg Ah Ay Uga Qayb Qaataan Gurmadka Fatahaadaha
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Beesha Caalamka Ka Codsaday In Si Degdeg Ah Ay Uga Qayb Qaataan Gurmadka…
Tababaraha kooxda Reds oo Weerar afka ah ku qaaday kooxda Manchester United kadib barbarihii kulankii Xalay Kadib natiijadii barbariha ee kulankii old Trafford ku dhaxmaray kooxaha liverpool iyo Manchester United ayaa macalinka hogaamiya reds sheegay iney gaaareen…
XANTA CAYAARAHA (SPORTS GOSSIP) Real Madrid ayaa isha ku heysa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund iyo xulka England Jadon Sancho oo 19 jir ah, iyo xidiga 19 jirka ah ee weerarka uga ciyaara xulka Norway Erling Braut Haaland, oo u ciyaara Salzburg…